Two Arakanese leaders from the Rakhine National Development Party (RNDP) left for China on Saturday at an invitation made by the Chinese communist party.
10 villagers charged with staging illegalademonstration against CNPC
Ten villagers in Madae Island of Kyauk Pru in Arakan state have been charged by police as they are suspected of leading the recent demonstration against the Chinese company, CNPC without permission from government authority, said U Tun Kyi who is included among them.
ထောင် (၉) နှစ် ချခံထားရသူ ရခိုင်ကျောင်းသားလူငယ် အဖွဲ့ထဲမှ ကိုရဲထက်စိုး အင်းစိန်ထောင်မှ လွှတ်မြောက်လာ
ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ၌ စစ်တပ်အတွက် အာဏာပိုပေးထားသဖြင့် တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့အား မြန်မာစစ်တပ်ထိုး စစ်ဆင်နေသည့် အပေါ် သမ္မတကြီးက အာဏာမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် က ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ကျောက်စိမ်းမှော်များတွင် တနိုင်တပိုင် ရေမဆေးကျောက် တူးနေသူများ ဒေသခံ၏ တဲများ၊ စက်ပစ္စည်းများကို အစိုးရ စစ်တပ်က မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ကာခြိန်းခြောက် နှင်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်း ဖားကန့်မြို့ခံများက ပြောသည်။
CNF က ချင်းပြည် တပြည်လုံးအတိုင်း အတာဖြင့် လူထုတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ငန်း စတင်
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF က ချင်းပြည်နယ် တပြည်လုံး အတိုင်း အတာဖြင့် လူထုတွေ့ဆုံးဆွေးပွဲ လုပ်ငန်းကို ယခုလမှစတင် အကောင် အထည်ဖေါ် လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
လာမည့် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်လွှင့်ရန် စီစဉ်နေသည့် မြန်မ့ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားသစ်တစ်ခုဖြစ် သည့် ပြည်ထောင်စု ရုပ်သံလှိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသား ဘာသာကြီး (၈)ခုအနက် ချင်းဘာ သာစကား (၂)ဘာသာဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များဖြင့် စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလုပ် အဖွဲ့ WGEC ( Working Group for Ethnic Co-ordinating)သည် ပြည်တွင်းရှိ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့၌ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့သည်ဟု အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ နိုင်ဟံသာက ပြောပါသည်။
တိုင်းလိုင်အမည်ဖြင့် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် ရှမ်းနီပါတီ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်
တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)တိုင်းရင်းသားများကို ယင်းအမည်မှန်ဖြင့် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုသော အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းပါတီ၏ တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးစောဝင်းထွန်းက ကေအိုင်စီ သို့ ပြောကြားသည်။
ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့်အပေါ် EU ကို UNFC ဝေဖန်
ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုမှလွဲ၍ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အားလုံးရုပ်သိမ်းပေး ခြင်းမှာ စောလွန်းနေသေးကြောင်း ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ(UNFC)က ယနေ့ ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်သည်။
ဘုရားသုံဆူလမ်းကြောင်းမှ သင်င်္ကြန်ပြီး ထိုင်းသို့ ပြန်ဝင်လာသည့်မြန်မာအလုပ်သမားများဖြင့် စည်ကား
မြန်မာနိုင်ငံ၏သင်င်္ကြန်ပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လာ အလုပ်လုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမား များသည် ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ ဘုရားသုံး ဆူလမ်းကြောင်းမှထိုင်း နိုင်ငံသို့ဝင်လာ နေသည့် အလုပ်သမား များ ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့် နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် စည်ကားနေသည်ဟု ဘုရားသုံးဆူမြို့မှသိရသည်။